မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: this is someone's present
ကြိုက်တယ်နော်ဘလော့မှာတင်လိုက်ရမလားကြားရင် အကြောင်းပြန်ချက်ချင်းတင်မယ် :) လို့ပြောတော့ ကြိုက်တယ်ဆိုတင်ပေါ့ ဒါပေမယ့် နာမည်မပါကြေး:) တဲ့ ကဲ..တင်လိုက်ပီ...(အမှတ်တယပါပဲဏော်) မယ်လိုဒီ ဘ၀ရဲ့အဆင်မပြေဆုံးနေ့တွေထဲမယ်လိုဒီ ကိုခလုတ်တိုက်ပြီးတွေ့တယ် .... သူ့ ရယ်( ရီ ) ... မေါမှုတွေကိုစီဗုံးပေါ်မှါ တစ်ခါတစ်ရံတိုးတိုးတိတ်တိတ် မျှယူရင်းအစိမ်းရောင်မြေမှါအသက်ရှုတတ်အေါင်ဦးဆုံးကူမျှသူလို့ရင်ဘတ်မှါစါထိုး တိတ်တိတ်ပဲငါလေးစါးချစ်ခင်တယ် ......ဓါတ်ပုံတွေဖလှယ်ရင်းတယ်ရီဖုန်းနဲ့ စကါးတွေပြောမိတဲ့ထိရင်းနှီးလါပေမယ့်လူပေတွေရဲ့ရှင်သန်ခြင်းမှါကွက်လပ်များပြီး စကါးလုံးနည်းလို့မယ်လိုဒီ့ အတွက်အကေါင်းဆုံးဆုတေါင်းတွေဒီကမ္ဘါကျဉ်းကျဉ်းမှါ လူမမြင် ... သူမမြင် ခြွေထါးတုန်းပဲ .................... ။ Gepostet von
ဟဲဟဲ..ကြွားတဲ့အခါလဲကြွားပေမပေါ့နော်ဒါပေသိ ဒီ someone က ကောင်လေးဟုတ်ဘူးကွ :)ပြီးတော့ ... ကြွားချင်စရာ အဲဒီလို someone အနေနဲ့လဲဟုတ်ဘူးလေနော်.. :Pဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်တော့ ဒီကဗျာလေးကို ခံစားပြီး လက်ဆောင်ရေးပေးတဲ့ ဒီ someone sis ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏
a lesbian poem? Nice, isn't it? love it. by the way, from today, only7hours different between Uk and Singapore.
eek :(I cannot find any words out related about lesbian feeling. You accused her as lesbian. May be your sis. :PFor you message about time different, thanksalot coz its useful for me. hehee
It is justajoke darling! nothing offensive. Friendly shooting. I believe lost in communication or lost in translation.